Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment उडिरहेको हेलिकोप्टरले किन झर्छ बारम्बार सामान ? - Pnpkhabar.com
उडिरहेको हेलिकोप्टरले किन झर्छ बारम्बार सामान ?
सोलुखुम्बु, १२ फागुन : उडिरहेको हेलिकोप्टरले जस्तापातासहितको सामग्री खसालेको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
पाइलट गुञ्जमान लामाको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय टोलीले आइतबार हेलिकोप्टरमार्फत टाक्सिन्दु पुगेर अवलोकन गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख इमनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लाका प्रमुख अधिकारीका अनुसार काठमाडौंबाट हवाई जहाजमार्फत लुक्ला आएको टोलीले घटनास्थल पुग्न कैलाश एयरकै हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको थियो । घना जङ्गल भएकाले हेलिकोप्टर अवतरण गर्ने ठाउँ नभएकाले आकाशबाटै जस्तापाता झरेको स्थानको अवलोकन गरेको टोली पुनः लुक्ला फर्केर बसेको छ । टोली सोमबार काठमाडौं फर्केर केही दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रले जानकारी दिए ।
घटनाको विषयमा आफूहरु गम्भीर भएको भन्दै उनले प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले थप निर्णय गर्ने बताए । बारम्बार यस्ता घटना घट्नुले हवाई उडानको समयमा असुरक्षित महसुस भएको स्थानीयको भनाइ छ । शनिबार सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-१ को टाक्सिन्दुबाट खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका-४ दिङ्बोचेका लागि डोरीमा झुण्ड्याएर निर्माणका सामग्री लाँदै गर्दा केही मिनेटपछि लुङ्दीङ जङ्गलमा झरेको थियो ।
यस विषयमा कैलाश एयर प्रालिका अपरेसन म्यानेजर प्रतापजङ्ग पाण्डले कमजोरीको बचाउ गर्न खोज्दै आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको जवाफ दिए । उनले नेपाल बाहिर रहेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउने भने पनि अन्तिममा फोनसमेत ‘रिसिभ’ गरेनन् ।
किन झर्छ बारम्बार सामग्री ?
टाक्सिन्दु पुगेका सोलुखुम्बुका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लिम्बुले अव्यवस्थित ढङ्गबाट मालसामान ढुवानी भएको पाइएको बताए । उनका अनुसार कार्गो ढुवानीमा प्रयोग गरिने जाली च्यातिएपछि सामग्री खसेको हो । घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले तत्कालका लागि टाक्सिन्दुको प्रहरीले अनिवार्यरूपमा निगरानी राख्ने बताए ।
प्रहरीले जाँच नगरी कार्गो ढुवानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन केही दिनमा आउला, त्यो कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी छ’, प्रहरी प्रमुख लिम्बुले भने, ‘नागरिक उड्डयनको पाटोबाट गर्ने एउटा होला हाम्रो तर्फबाट तत्काल सुरक्षा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ ।’ सानो ठाउँमा निर्माणका सामग्री अव्यवस्थित ढङ्गबाट कार्गो ढुवानी भएकाले विमानस्थलबाटै ढुवानी गराउँदा सहज हुने बताइएको छ ।